Anxt Capsules | Anxt
Home / Collections / Best Selling Products / Anxt Capsules
Anxt Night Capsules dia famenon-tory ahitra malemy paika vita amin'ny sakafo azo antoka sy voajanahary voajanahary izay eken'ny rehetra fa mamporisika ny fandaharam-potoanan'ny torimaso mahasalama.
Ny singa rehetra ao amin'ny Anxt Night Capsules dia mandray anjara amin'ny fitazonana ny fihetseham-po ho voafehy sy tohana mandritra ny alina, ary misy akora tsy mampatory mba hifoha fahatsapana araka ny tokony ho izy taorian'ny torimaso tsara.
Raisina 30 minitra alohan'ny hatory isan-kariva, ity fomba tsy manam-paharoa ity dia mety indrindra ho an'ireo izay mitady fomba voajanahary mba hanampy amin'ny torimaso torimaso sy torana.
Matory matetika ny olona matory ary matory foana. Anxt's formulate of all-natural zavamaniry dia nampiasaina nandritra ny taonjato maro mba hanampiana amin'ny fialan-tsasatra sy hanohanana torimaso am-pilaminana.
Ny kapsily tsirairay dia misy Ashwagandha, Bacopa Monnieri, 5-HTP, L-Theanine, Rhodiola Rosea, GABA, ary Lemon Balm.
Namboarina tany Angletera, ny fitsaboana an-torolàlana voajanahary an'i Anxt dia mpihinana legioma sy mpihinan-kena.
Makà kapsily 1 hatramin'ny 2 fotsiny 30 minitra alohan'ny hatory isan'alina mba hatoriana matory tsara.
• kapsily 60 (famatsiana 1-2 volana)
• Alaina 30 minitra alohan'ny hatory indray mandeha isan'andro
Mba hahazoana fanampiana mandritra ny andro, andramo Fanafihana amin'ny antoandro.
Anxt Capsules: Makà kapsily 1 hatramin'ny 2 30 minitra alohan'ny hatoriana. Aza mihoatra ny capsules 2 isan'andro.